Zifa Inotsamwisa Komiti yeParamende Inoona Nyaya dzeMitambo
Kurume 05, 2020
Nhengo dzeparamende dzashatirwa mushure mekunge sangano reZimbabwe Football Association (ZIFA) nekanzuru yeBulawayo vatadza kunopa humbowo kudare mushure mekunge sangano rezvenhabvu muAfrica reConfederation of African Football (CAF) rati nhandare dzese dzemuZimbabwe hadzikodzeri kutambirwa nhabvu.
Nhengo dzekomiti inoona nezvevechidiki nemutambo dzaratidza kusafara nekuita kweZIFA dzichiti hazvishamisi kuti mutambo wenhabvu wasvika pauri munyika nekuti ZIFA haikoshesi basa rayo pamwe nedare reparamende.
Imwe nhengo yekomiti iyi, Muzvare Tatenda Mavetera veZanu PF, vati danho reCAF rakabata vakawanda nevatsigiri venhabvu munyika uye kana ZIFA isingakoshesi izvi, zvinoreva kuti haina hany’a nenhabvu.
VaOmega Sibanda veZanu PF varatidzawo kusafara nekuita kweZIFA nekanzuru yeBulawayo vachiti ndivo vanhu vange vakanyanya kukosha kukomiti yeparamende
VaGift Banda veMDC vatiwo zvange zvakakosha kuti ZIFA ive pamusangano wanhasi sezvo iri iyo inotaura neCAF ichizozivisa vamwe vese zvinenge zvabva kuCAF.
Vachipa humbowo pamusoro penyaya iyi, vakafanobata chinzvimbo chemunyori mubazi rezvematunhu, VaJoseph Mhakayaora, vati zvose zvinodiwa neCAF zvingadai zvagadzirwa munhandare yeNational Sports Stadium dai vaipihwa mari nehurumende.
Vati nhandare iyi yakapedzisira kugadziridzwa makore gumi apfuura nemari yakabva kuChina.
Vati gore rapfuura chairo vakaisa bhajeti remamiriyoni mazana maviri nemakumi mana emadhora rekusimudzira National Sports Stadium, asi hapana chakabuda.
Asi vakafanobata chinzvimbo chemunyori mubazi revechidiki nemitambo, VaBenson Martins Dube, vaudza paramende kuti hurumende yakataoudza ZIFA kuti inyorere kuCAF ichiikoka kuti izoongorora zvakare National Sports Stadium neBarbourfields sezvo nhandare idzi dziri kugadziriswa.
Vati hurumende iri kushandisa mamiriyoni makumi matatu nematatu ekugadzirisa nhandare idzi uye vati vanovimba kuti dzichange dzapera kugadziriswa mukati memazuva gumi nemana ari kuetevera.
Zvichakadai, CAF yanyorera ZIFA ichiramba chikumbiro chekuti iongorore zvakare nhandare idzi ikati inoda kuti Zimbabwe idome nhandare iri kunze kweZimbabwe yainoda kutambira mutambo weZimbabwe neAlgeria.
Mutauriri ZIFA, VaXolisani Gwesela, vaudza Studio 7 kuti hongu vatambira gwaro iri kubva kuCAF mushure mekunyorera sangano iri neMuvhuro.
VaGwesela vatiwo vatadza kuenda paramende nhasi sezvo vange vakabatikana uye vakanyorera kuparamende neChitatu vachiti musangano wanhasi uendeswe mberi.
VaTrump Vopinda Mumusangano Wavo weKupedzisira weG20 Kunyange Vachiri Kuramba Kuti Vakakundwa Musarudzo